शरिरको यी अङ्गबाट कट्कट् आवाज निस्केमा हुनसक्छ खतरनाक बिमारी – Sandesh Press
June 20, 2021 330
काठमाडौँ । प्रत्येक दिन, एक व्यक्ति केहि रोग बाट पीडित भएकै हुन्छ जसको कारण हरेक व्यक्ति दुखी हुन्छन्। र यही कारण हो कि आजकल विश्वका अधिकांश मानिसहरू गम्भीर बिरामीको शिकार भइरहेका छन्। त्यो किनभने एक व्यक्ति आफ्नो शरीर भित्र के भइरहेको छ समय मा थाहा नै पाउँदैन, तर अब यो पत्ता लगाउन सकिन्छ।
तपाईंलाई यो थाहा नहुन सक्छ, तर तपाईंको शरीरले तपाईंलाई दैनिक रुपमा चेतावनी दिन्छ कि तपाईं चाँडै बिरामी पर्नुहुनेछ। म तपाईंलाई बताउँछु कि अनुसन्धानमा, यो देखिएको छ कि बिरामी हुनु अघि तपाईंको शरीरले शरीरबाट आवाज दिएर धेरै प्रकारका संकेतहरू दिन्छ। त्यसकारण बिरामी हुनु अघि यी आवाजका संकेतहरू समयमै बुझ्नु आवश्यक छ। आउनुहोस् जानौँ कुन रोगको आवाजको संकेत के हुन सक्छ त ?
मुखबाट आवाज निकालेर घुर्नु
यदि सुत्दा तपाईंको मुख वा नाकबाट घुर्ने आवाजहरू निस्कछन् भने, यो मोटोपना र घाँटी झिल्ली को अवरोधको कारण हुन सक्छ। घुर्ने यो समस्याले एक व्यक्तिलाई मधुमेह, स्लीप एपनिया र स्ट्रोक जस्ता गम्भीर रोगहरूको जोखिममा पार्न सक्छ।
जार्नीहरुबाट आवाज निस्कनु
यदि जोर्नीहरूको आवाज तपाईंको जोइन्टबाट आउन थाल्यो भने यसको मतलब यो छ कि तपाईं घुँडा र ऑर्थराइटिस बाट धेरै नै पीडित हुनुहुनेछ। त्यसकारण, समयमा डाक्टर को सल्लाह लिनुहोला।
मुटुको धडधड आवाज सुनिनु
सामान्यतया, यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले सुत्ने समयमा छिटो मुटुको धड्कनको आवाज सुन्छन्। साथै, यस्तो सुनिन्छ कि मुटु छिटो चल्दैछ। यदि यी कुराहरु हुन शुरू भयो भने यसको मतलब यो छ कि त्यहाँ चेकअपको को समस्या छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि कफी र रक्सी थोरै मात्रामा सेवन गर्नाले यसले स्वास्थ्यलाई सुधार गर्दछ।
पेटबाट गुडगुड आवाज आउँनु
मानिसहरूलाई धेरै पाचन समस्याहरू हुन्छन् र कहिलेकाँही पेटको आवाज पनि आउन थाल्छ र पेटबाट गुडगुडको आवाज पेटबाट आउन थाल्यो भने यो कलेजो समस्याको संकेत हुन सक्छ। यसमा, एक व्यक्तिको पेट फुल्छ र पीडा बढी हुन्छ। त्यसकारण, यी आवाजहरू नोट गर्न र चाँडै एक डाक्टरलाई भेट्न महत्त्वपूर्ण छ।
नाकबाट सिटीको जस्तो आवाज आउनु
धेरै जसो मानिसहरूलाई चिसो लागी रुघाँ लाग्छ, जसको कारणले तिनीहरूको नाक कराउन थाल्छ रउनीहरूबाट बाहिर आउन थाल्छ, जसको मतलब हो कि तपाईंलाई चिसो साइनस आदिको समस्या हुन सक्छ। नाकबाट आवाज आउनु कार्टिलाजको कारणले हुन सक्छ।
Prevके तपाई ३६ वाला कम्मरलाई घटाएर २६ बनाउन चाहानुहुन्छ ? बिहानै पिउनुहोस् यो स्पेशल ड्रिंक
बाहिर निस्किदै हुनुहुन्छ?सावधान! मनसुन फेरि सक्रिय‘ यी क्षेत्रहरूमा सतर्क रहन आग्रह